Kungasithinta kanjani ukungcoliswa kwemvelo? Yile ndlela okusithonya ngayo. | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukungcola kusithinta kanjani
USergio Gallego | | Ukuguquka kwesimo sezulu, Isimo Sezulu
Ukungcoliswa kwemvelo Kungumyalo wosuku futhi noma ngabe ungakuqapheli futhi ukunake kakhulu, kuthinta umzimba wonke kabi. Kungcoliswa kanjani thina?
Ukuhlala edolobheni elikhulu kusho ukungcoliswa kwemvelo okuphezulu kakhulu futhi okungaba nemiphumela emincane njengokucasulwa kwamehlo nje ezifweni ezimbi kakhulu. Ngibe sengichaza izimbangela kwalokhu kungcoliswa kwemvelo futhi ukungcola kusithinta kanjani.
1 Izimbangela zokungcola kwemvelo
2 Kungcoliswa kanjani thina?
Izimbangela zokungcola kwemvelo
Lokhu kungcoliswa kwemvelo kuqukethe ukukhishwa kwezinto ezinobuthi ezisemoyeni njenge-carbon monoxide, i-sulfur dioxide noma i-nitrogen oxide. Zonke lezi zinto kuthinta umzimba ngendlela yokucasuka emphinjeni, ukukhwehlela, ubunzima bokuphefumula noma nokuthuthukisa izifo zenhliziyo ezingalapheki. Ukugwema lokhu, kuyalulekwa ukuthi ungaphumeli ngaphandle uyokwenza imisebenzi yangaphandle lapho amazinga okungcola ekhona kuphakeme kakhulu. Okunye ukuncoma ukuthi ungahlali eduze kwanoma iyiphi i-nucleus enethrafikhi eningi noma amafektri.
Umoya emadolobheni amakhulu emhlabeni awuhlanzekile kakhulu futhi ubonakala ngawo ukungcola okuningi. Lokhu kungcola kubangelwa ubuningi bezinto ezifana, ngokwesibonelo, namagesi aqhamuka ezimotweni noma ezimbonini ezinkulu futhi akha ungqimba olukhulu lokungcola kuwo wonke umkhathi. Lolu ungqimba lwenhlabathi Kwezinye izimo livimbela ilanga ukuthi lingakhanyi kukho konke ukugcwala kwalo futhi liphazamisa kakhulu empilweni yabantu.
Kungcoliswa kanjani thina?
Ukungcoliswa kwemvelo kunikezwa ngaphezu kwakho konke yi izimoto ezeqile emadolobheni amakhulu futhi angcolisa i-carbon monoxide, i-nitrogen oxides ne-carbon dioxide. Okokuqala Unobuthi futhi ngemithamo emincane kukhiqiza ikhanda, isiyezi nokukhathala. Ngobuhle, ama-nitrogen oxides ayingozi kakhulu kulabo abaphethwe yisifuba somoya. Ekugcineni, i-carbon dioxide ayingcolisi kakhulu kepha iyaba nomthelela ukushisa kakhulu komhlaba we planethi.
Kunokungcola okwandayo esikuphefumulayo nsuku zonke futhi nakho okubangelayo ukwanda kokuzwela kokuphefumula, ngaphezu kokuthuthukisa ukungezwani komzimba esingaba nakho. Ngaphandle kokungabaza, ukungcola kuyinto yokunciphisa kakhulu ngangokunokwenzeka futhi ngenxa yalokhu kufanele sibhekane nokusetshenziswa futhi sikhuthaze izindlela ezinciphisa ukukhishwa kwamagesi emkhathini.
Manje njengoba usuyazi ukungcola kusithinta kanjaniMhlawumbe kufanele uhlale phansi ucabangisise ngokuthi umoya owuphefumulayo ukukuthonya kanjani njengamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukungcola kusithinta kanjani
LOKHU KUSEBENZA KAKHULU
Sawubona, unjani? Bengifuna ukwazi, lokhu kumayelana nokungcola
rodolfo castañio kusho
Ngikuthola kunzima kakhulu
Phendula ku-rodolfo castañio
U-ALEJANDRA GENSOLLEN RODRIGUEZ kusho
NGIYABONGA KAKHULU .... NGISEBENZISELA UMBIKO
Phendula ku-ALEJANDRA GENSOLLEN RODRIGUEZ
Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa, ama-koala ashintsha indlela aziphatha ngayo
IGreat Barrier Reef '' isesimweni sokugcina ''